Izinto ezinokuboliswa ziintsholongwane, iPhepha, ukupakishwa kweplastiki
IQELA le-CHUNKAI lizinikele ekwakheni inkampani yokupakisha ephezulu ukusukela ngo-2013 Iintlobo zethu ezahlukeneyo ezisandul 'ukukhutshwa, iimveliso ezikumgangatho ophezulu zamazwe aphesheya kunye neenkonzo zabathengi ezinononophelo zixatyiswa kakhulu ziimpawu ezaziwayo ezinje ngeDisney, iMengniu Dairy, iPepsi, njl. Iminyaka engama-25, ukuhlangabezana neemfuno zabathengi besisandula imveliso yethu, ngoku ebandakanya ukupakisha iphepha, ukupakishwa kweplastiki, ukupakisha okubolayo kunye nezinye iimveliso zokupakisha.
I-Shanghai Shenhe Packing Technology Co, Ltd.-ephambili kwimveliso yokupakisha yeplastiki
I-Feng Qi Feng yokuPrinta iTekhnoloji (eShanghai) Pty, Ltd.-ubukhulu becala kwimveliso yokupakisha iphepha
I-Shanghai Chunkai Trading Co., Ltd.-ubukhulu becala kwishishini lokungenisa nokuthumela ngaphandle
Isisombululo sokupakisha esi-One-Stop
Ngotshintsho olwakhayo, iLOTTE Chemical izinikele ekusebenziseni ulawulo oluzinzileyo ukuze yenze ubomi obutyebileyo kunye namaxabiso exesha elizayo. Ubomi obutyebileyo kunye namaxabiso exesha elizayo.
Unxibelelwano ngaphandle kwezithintelo
Ulwimi: IsiNgesi, isiTshayina, isiRashiya, iSpanish, isiFrentshi, isiArabhu, isiTaliyane, isiJapan, isiPhuthukezi
Uyilo loMzobo; uyilo lwe3D; ngentando yakho
I-10QC kunye ne-4 ye-QA; inkqubo yolawulo lomgangatho engqongqo
Ngaphezulu kweminyaka esi-8 yamava okuThumela kwelinye ilizwe; Ukuthumela ngaphandle kumazwe angaphezu kwe-100; Ubungcali kuLwandle, umoya, ukuthunyelwa komhlaba ukugcina iindleko zokuhambisa kubathengi kunye nokwenza amalungiselelo okuhambisa ngexesha